Saafi Films - News: Qaraxyo khasaaro geystay oo xalay ka dhacay Maqaaxi lagu shaaho oo kutaalla magaalada Laascaanood (Warbixin)
Qaraxyo khasaaro geystay oo xalay ka dhacay Maqaaxi lagu shaaho oo kutaalla magaalada Laascaanood (Warbixin)
Kooxo hubeysan oo heybtooda aan la aqoonsan ayaa xalay fiidkii qaraxyo bambaano ku weeraray goob dad badan ku sugnaayeen oo ahayd maqaaxi lagu shaaho kuna taallay magaalada Laas-caanood ee gobolka Sanaag.
Inta la ogyahay 2 qofood ayaa ku dhaawacmay qaraxyadaasi kuwaasi oo loola cararay cusbitaalka magaalada iyadoo howlgalo saaka ay ka wadaan ciidamada amaanka halka xalay qaraxyadu ka dhaceen.
Gudoomoyiha Laascaanood keyse Maxamuud Xaaji oo taleefoonka kula xiriirnay ayaa ka gaabsaday in arintaan uu ka hadlo wuxuuse sheegay inay u arkayaan kuwa kasoo horjeeda nabad galyada inay qaraxyada fuliyaan.
Saraakiil dhinaca amaanka qaabilsan oo iyana xiriir dhinaca taleefoonka ay la sameysay idaacada Risaala ayaa usheegay inay dib kasoo sheegi doonaan qaraxyadaan waxa ay ahaayeen iyo sababta ka dambeysa in maqaaxi shaah lagu weeraro.
Dadka ayaa saaka hadal haya qaraxyadii bambaano ee xalay lagu weeraray maqaaxida shaaha laga cabayey ee kutaalla magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sanaag waxaana qaraxyadaan noqonayaan kuwii ugu horeyey oo nuucaan oo kale kana dhaca halkaasi.
nasro on October 06 2012 ·
4,508,374 unique visits